Fikatonan’ ny fitobian’entan’ny orinasa IMEX Manodidina ny 200 ireo mpandraharaha matiantoka
Tontolon`ny Fitsarana Maniry ny fitohizan`ny fanatsarana natao ny minisitra
Na dia 7 volana monja aza ny fotoam-piasana izay nitantanan`ny minisitry ny Fitsarana, Rtoa Norovololona Harimisa, dia nisy ny ezaka vitan`ny minisitera tao anatin`ny fotoana fohy.
Trafikana volamena Tsy mety tratra ireo tena atidoha
Malagasy 3 no tratra nitondra volamena milanja 25,5 kilao tany Maorisy ny 10 janoary lasa teo, saika ho any Mumbai (Inde) ny roa raha toa ka nilaza ny ho any Dubai ny iray.
Andrefambohitra Ampitatafika Razana maromaro natsingevan’ny rano
Razana maromaro no hitan’ny fokonolona tao Andrefambohitra, Ampitatafika Atsimondrano ny alatsinainy 13 janoary hariva teo.
Minisiteran’ny ny mponina Gaboraraka ny fitantanana, hoy ireo mpiasa
Nanao antsoavo tamin’ny filoham-pirenena vaovao sahady omaly ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpiasan’ny minisiteran’ny mponina na SYNAE-Population mba hijery akaiky ny zava-misy ao amin’ny minisiteran’izy ireo.
Lalao Ravalomanana “Ao anatin’ny 100 andro misy asa goavana vita”
Tonga niarahaba ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, Lalao Ravalomanana omaly ireo mpiara-miasa akaiky aminy noho ny fahatongavan’ny taona vaovao 2019.
Ampijalian’ny delestazy i Toamasina Tsy ampy solika ny Jirama
Hopitaly kely – Gare routière – Tanambao V – Ankirihiry avaratra sy atsimo – Andranomadio – Cité Valpinson – Cité Haras – Ambohijafy – Asecna – Antseranampasika – Tahity Kely – Rasseta – Ampilaolava – Analamalotra – Ivoloina – Ctht – Lycée Agricole –
Halatra jiro eny amin’ny digin’i Fenoarivo 9 lahy migadra eny Tsiafahy
Miisa 15 hatreto ny isan’ireo olona efa tratra nangalatra ireo jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro eny an-dalambe eny amin’iny digy mihazo an’i Fenoarivo Atsimondrano iny.
“Avoahy izao dia izao ny entanay”, hoy ny antsoantson’ireo mpandraharaha mpanjifa tamin’ny fihaonan’izy ireo tamin’ny orinasa IMEX eo ambany fanaraha-mason’ny fadin-tseranana tetsy amin’ny Salle d’oeuvre EKAR Antanimena omaly alakamisy 25 oktobra.
Nohidiana ny fitobian’entan’ity orinasa tantanan’olon-tsotra eny Tanjombato ity nanomboka ny 12 septambra lasa teo. Nilaza anefa ny teo anivon’ny orinasa fa ny entana rehetra lasa eny dia efa vita fitsirihana avokoa. Nanara-dalàna ny kaontenera miisa 12 izay nogiazan’ny fadin-tseranana ary manana ny valin’ny fitsirihana avy amin’ny inspektoran’ny fadin-tseranana teny amin’ny sampandraharaha teny Ankorondrano mialoha ny nahatongavany tao Tanjombato. Hatramin’izao anefa, dia nohidiana izy io ary nolazaina fa nisy ny fanambarana diso natao izay nolazain’izy ireo fa tsy mitombina. Noho ny fahataran’ny fivoahan’entana dia betsaka ny fampitahorana azon’ny orinasa IMEX amin’ireo mpandraharaha mpanjifa ka nahatonga ity fihaonana ity nanazavana ny tena zava-misy marina. Nanambara izy ireo fa noho ny fahatarana be loatra amin’ny famoahana ny entan’izy ireo dia efa marobe ny fatiantoka. Manginy fotsiny ny fanerena ataon’ny banky, izay tsy miraharaha izany olana izany, ny amin’ny famerenam-bola tokony hataon’izy ireo. Tsy mahafantatra izay tena olana mazava ifandroritan’ny orisana IMEX sy ny fadin-tseranana izahay, hoy hatrany ireto mpanjifa fa mila avoaka haingana ny entanay satria io no asa fivelomanay. Tsy mpambongady na mpanondrana fa saika mpandraharaha madinika avokoa ireto mpanjifa ireto ary avy any Sina ny ankamaroan’ny entana. Maro ny manahy mafy ny amin’ny fahapotehan’ny entana satria betsaka ny mora simba ao anaty kaontenera ao. Nanao antso avo tamin’ny tale jeneralin’ny fadin-tseranana izy ireo mba hijery ny tombontsoan’ny mpanjifa. Efa nisy ihany ny fifanatonana, hoy ny teo anivon’ny orinasa IMEX saingy tsy mbola mivaha ny olana ary ny mpanjifa no mizaka ny tsy eran’ny aina. Vao mainka mihapotika hatrany ny toekarena satria mitohana sy miato hatramin’ny fandraharahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka any Azia.